Yaa bixiyey talada lagu sameeyey hogaanka daba-galka siyaasiyiinta mucaaradka ah? – Hornafrik Media Network
Yaa bixiyey talada lagu sameeyey hogaanka daba-galka siyaasiyiinta mucaaradka ah?
By Liibaan Nuur	 Last updated Sep 1, 2020
Hoggaanka dhawaan ay hirgalisay hey,adda Nabada sugida Soomaaliya ee NISA ayaa la sheegay in saameynta hoggaanka ay ka timid talo uu bixiyay,Taliyihii NSS ee xiligii Dowladii kacaanka Gen. Axmed Saleebaan Dafle oo biishi January 2020 yimid magaalada Muqdisho.
Axmed Dafle ayaa markii uu yimid Muqdisho waxa uu la kulmay madaxweyne Farmaajo iyo Taliye Fahad Yaasiin ,wuxuuna kula taliyay in aysan marna ogolaan wax la yiraahdo xorriyad qowl iyo doorasho, sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan NISA.
Qorshaha ugu weyn ayaa ah cabsi gelinta siyaasiyiinta mucaaradka ah ayna waajibtahay in dabagal iyo cabsi galin lagu sameeyo.
Xubnaha noo waramay waxay sheegeen in si loo bilaabo qorshahan ay Farmaajo iyo Fahad bilaawgii sanadkan dalka Erteria u direen 80 sarkaal, kuwaas oo soo qaatay tababar culus, oo u sahlaya dabagalka siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo saxafiyiinta.
Ciidankan oo dib loosoo celiyay bishii June ee sanadkan, waxayna la shaqeyn doonaan hoggaanka cusub ee loo sameeyey daba galka siyaasiyiinta.
Sidoo kale ciidankan ayaa waxaa la sheegay in madax looga dhigay sarkaal lagu magacaabo Cabdullahi Dhere oo G/dhexe ah.
Qorshahan cusub ayaa waxaa maal-gelineysa dowladda Qatar, sidoo kale Qatar waxay qalabeyn doontaa ciidamada lagu soo tababaray Eriteria ee loogu talagalay dabagalka siyaasiyiinta mucaaradka ah.
Xog: DF oo masuul u magacaawday hoggaanka koox daba-gal ku sameysa siyaasiyiinta mucaaradka